Tsy misy mba milamina… | NewsMada
Tsy misy mba milamina…
Vintan-dratsy mitambatra ve, sa tena vokatry ny faharatsian’ny fanomanana mihitsy? Tara ny fanombohan’ny fanadinana bakalorea, omaly maraina. Tsy dia olana loatra iny, fa nampisavorovoro saina ireo mpiadina nisafidy ny taranja “allemand” kosa ny fahitana fa nisy latsaka ny laza adina!
Hadisoana, an’olombelona. Marina izany. Kanefa, raha fanadinam-panjakana izay tena zava-dehibe ho an’ny fiainana, toy ny bakalorea ve, tsy mba tokony ho voasoroka mialoha izany rehetra izany? Na inona na inona ambara, nisy ny tandrevaka sy ankahamehana tao.
Eny, ahitam-bahaolana avokoa anie ny olana rehetra e! Mety handray fepetra ny tompon’andraikitra, ka hatao toy ny tsy misy ny laza adina tsy tomombana, na koa tonga dia homena naoty avokoa ny mpiadina… Azo hatao avokoa izany, kanefa ampy hampilamina ny sain’ny mpiadina izay efa voakorontana ve?
Filaminan-tsaina… Tsy misy afa-tsy izay no mba irariana ho an’ny mpanala fanadinana. Mba samy niezaka tamin’izany ny mpanabe sy ny ray aman-dreny. Any amin’ny tsy ampoizina indray anefa no miseho ny tsy fetezana. Tsy mba misy zava-milamina mihitsy ve?
Nahitana korontana teo ny fanadinana hidirana ho mpiasan’ny fadin-tseranana. Tsy hasiana resaka intsony angamba ny olana etsy sy eroa iainana sy miandry ny Malagasy isan-tokantrano. Izay manangasanga toy ny fiakaran’ny saran-dalana, manginy fotsiny.
Aleo hatreo, sao hisy hilaza indray fa ny mpanao gazety izay mitatitra ny eny anivon’ny fiarahamonina no mpivoy ny tsy filaminana eto…